လေကြောင်းလိုင်းများ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများသည်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၂၅ ဘီလီယံထပ်မံ ထပ်မံ၍ တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ၃၀၀၀၀ ကျော်ကျဆင်းလာသည်
ဂျက်လေယာဉ်များသည် ၂ ဝ ၂ ဝပြည့်နှစ်မတ်လ ၂၇ ရက်၊ Pennsylvania ရှိ Pittsburgh ရှိ Pittsburgh International Airport တွင်လေယာဉ်ပြေးလမ်း ၂၈ တွင်ရပ်နားထားသည်။
“Despite the aggressive self-help measures the company has taken to bolster its financial position, and even with several thousand of our colleagues opting for voluntary leave and early retirement, nearly 20,000 American Airlines team members are facing furloughs in just two short weeks, and several markets in our domestic network are at risk of significant reductions in air service,” အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်း‘ CEO Doug Parker wrote to lawmakers and Trump administration officials inaletter that was also signed by labor union leaders that represent most of its workers.
ယူနိုက်တက်လေကြောင်းလိုင်း CEO Scott Kirby on Wednesday said in an interview with Politico that the industry needs additional aid and said he was hopeful.
Earlier this month, United said it could cut around 16,000 အလုပ်အကိုင်များ this fall when after the current round of aid expires, though it has reachedapreliminary agreement with its pilots’ union to avoid nearly 3,000 furloughs. The union said Wednesday that its leadership approved the agreement, which prevents furloughs through at least June 2021, that includes work reductions that aim to lower costs, among other provisions. The Air Line Pilots Association’s some 13,000 members will vote on the agreement next week.
Tags: အကူအညီ, လေကြောင်းလိုင်း, ဘီလီယံခန့်, coronavirus, ဖြတ်တောက်မှု, အလုပ်, အလုပ်, loom, တွန်းထိုး, သမဂ္ဂများ
အစိုးရများနှင့်ကွန်ယက်များ - ဘဏ္theာရေးစိုးလ်အတွက်တိုက်ပွဲ
Bitcoin သည်ယခင်ကထက်နှေးကွေးသောနှုန်းဖြင့်ဆက်လက်မြင့်တက်နေမည်ဟု Bloomberg မှလေ့လာဆန်းစစ်သူကရှင်းပြသည်